बिहानी ५ टिप्स : दिन/स्वास्थ्य राम्राे बनाउन केके गर्नुपर्छ ? – आफ्नो प्रेरक संसार
Bibas Kulung — ३१ असार २०७८, बिहीबार ०७:२१0comment
१.बिहान उठ्नेबित्तिकै शरीर तन्काउने व्यायामहरू गर्नुहोस् । यसले रक्तसञ्चार र पाचनलाई बलियो बनाउँछ र ढाडको समस्याबाट जोगाउँछ ।
४. दूध वा दही खाएर वा चक्की खाएर भए पनि दिनदिनै क्याल्सियम शरीरलाई दिलाउनुस् । ती वर्षको भएपछि तपाईंको हाडको घनत्व घट्दै जान्छ । हड्डी जोगाउन तपाईंले कम्तीमा पनि २०० मिलिग्राम क्याल्सियम लिनैपर्छ ।
५.लसुन र प्याजमा स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने सबै तत्व विद्यमान हुन्छन् । बालबालिकालाई हुने धेरै संक्रमणलाई काँचो लसुनको सेवनले रोक्छ । लसुन, प्याज काँचै खाएको राम्रो, अनि प्याजलाई फलफूलको जुससँग लिए हुन्छ ।
टिप्स प्रेरक भनाई बिहानी टिप्स मनछुने भनाई महान भनाइ सफलता स्वास्थ्य टिप्स